बेनिडर्ममा के गर्ने | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | España, समुद्र तटहरू
के जाडो को लागी गर्मी को बारे मा सोच्न छ? अवश्य! यो तब हुन्छ जब हामी सूर्यलाई याद गर्छौं र सबैभन्दा तातो पार्दछौं, त्यसैले यसले तपाइँको गर्मी बिदाको तालिका बनाउन चाहान्छ। त्यो आजको बारेमा सोच्दै हामीले कुरा गर्नु पर्छ बेनिडर्म, स्पेनको एलिसान्टेको तटमा.
समुद्र तट, सबै प्रकारको पर्यटन, रात, प्रकृति, धेरै सूर्य। बेनिडोरम भनेको के हो, त्यसैले यस पोष्टलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र यसलाई सुरक्षित गर्नुहोस् जब बर्फीलो दिनहरू आउँछन् र तपाईं यसको गोल्डन बलुवामा लपेट्न चाहनुहुन्छ। ल यसरी हामी गर्छौं।
2 बेनिडर्ममा के गर्ने
क्षेत्र जहाँ यो छ गर्मी गन्तव्य उदाहरणका लागि, रोमीहरूको अघिल्लो अनुच्छेदको प्रमाणहरू भए पनि मुसलमानहरूले यो समयमा कब्जा गरेका थिए। तेह्रौं शताब्दीमा यो स्पेनीले फेरि कब्जा गरे तर यो शान्त समय सुरु भएन किनकि ओटोम्यान समुद्री डाकू र बर्बरहरूले आक्रमण गरे।
यो अधिक जनसंख्या बन्न शुरू भयो, माछा मार्ने काममा आफूलाई समर्पण गर्न र कृषिलाई अनुमति दिन, यो विकास २० औं शताब्दीको मध्यसम्म रह्यो।
यो थियो १ 50 s० को दशक माछा मार्ने क्षेत्रको स the्कटको बेलामा कम्पासले आफूलाई नयाँमा पुर्‍याउन थाल्यो पर्यटन उद्योग। र ठूलो सफलताका साथ! संख्याले भन्छ कि लगभग million० लाख मानिसहरू प्रत्येक वर्ष आउँछन्।
भौगोलिक हिसाबले शहर दुई समुद्र तट बीचको पहाडमा छ। एउटै समयमा पाँच भागमा विभाजित छ र हरेकको आ-आफ्नै हुन्छ। त्यहाँ पुरानो शहर छ, एल कास्टेल, वेस्टरोस, लेटेन्टयी दुई मध्ये प्रत्येकको आफ्नै समुद्र किनार, ला काला र एल Rincón डी लोइक्स।
दुई समुद्र तट बीच एक ढु a्गा प्रोमन्ट्री र बेनिडर्मको बन्दरगाह छ। शहरी डिजाइन एक प्रतिभा हो कि १ 50 .० को दशकमा शहरको मेयर पेद्रो जारागोजा अर्ट्सको हस्ताक्षर।
तपाईंको अनुसार प्रमुख योजना योजना प्रत्येक भवनको आफ्नै मनोरंजन क्षेत्र हुनुपर्दछ, समयको साथ सुनिश्चित गर्दै कि सबै कुरा भवनहरूको निचोन्न नहुनुहोस्। र परिणाम एकदम स्वच्छ छ, त्यसैले बोल्न। पछिल्लो, बेनिडोरम एलिसेन्टे र डेनियासँग रेलमा जोडिएको छ। Alicante संग वर्तमान मा एक ट्राम सेवा हरेक आधा घण्टा संचालन हुन्छ र Dénia को ट्रेन हरेक घण्टा संचालन हुन्छ।
अ ,्ग्रेजी, डेन्स, बेल्जियन, डच, जर्मन र आयरिशले बेनिडर्मलाई माया गर्दछ। के यो यसको अविश्वसनीय सूर्य र रमाइलो तापक्रमको कारणले हो? अवश्य हो।
समुद्र तट पहिले आउँछ त्यसैले उनीहरूलाई चिन्नुहोस्। सबै भन्दा लोकप्रिय र मान्छे संग छ Levante समुद्र तट। यो युरोपमा सबैभन्दा प्रसिद्ध समुद्रतटहरू मध्ये एक हो, र यो पनि सबै वर्ष भर यसको आफ्नै छ। यो पुन्टा पिनेटबाट पुन्टा क्यान्फाली दुई किलोमिटर लामो छ। यो राम्रो सुनौलो बालुवाबाट बनेको छ र यसको पानी शान्त र पारदर्शी छ।
लेटेन्ट धेरै सेवाहरू छन्, ,,4.600०० सनबेडहरू, १० क्षेत्रहरूमा १,1.400०० छाता, खुट्टाका लागि १ show वर्षा, बालुवाबाट जोगिनको लागि पदयात्रा, दुई इकोलोजिकल शौचालय, बच्चाहरू र लाइफगार्डहरूका लागि खेल मैदानहरू। यसका साथै धेरै रेस्टुरेन्ट र बारहरू पनि छन्। यसको औसत चौडाइ 19 55 मिटर छ यद्यपि यसले parts 75 मिटरसम्म पुग्छ।
अर्को लोकप्रिय समुद्र तट हो पोनिटे बीच, पोर्ट को दक्षिण। यो तीन किलोमिटर लामो बेनिडर्मको सबैभन्दा लामो छ। एक हो सहरी बीच कार्लोस फेरर द्वारा डिजाइन गरिएको नयाँ र आधुनिक बोर्डवाक र धेरैको साथ बार, रेस्टुरेन्ट र नाइटक्लबहरू। अन्य सेवाहरू सामान्य हुन्छन्: वर्षा, डेक कुर्सि, छाता, खेलहरू। लेभन्ते र पोनिटेमा त्यहाँ वर्षभरि धेरै घाम लाग्छ, जाडोमा पनि।
यी दुई समुद्री तटहरूका बीचमा, पुरानो शहरमा र क्यानाफली पहाडको गठन गर्ने आश्रयमुनि, त्यहाँ एउटा सुन्दर सानो कोभ भनियो खराब पास। उनको अगाडि छ बेनिडर्म टापु जो डाइभिंग र स्नोर्कलिंग अभ्यास गर्नेहरूका लागि प्रसिद्ध गन्तव्य हो किनभने यसमा डुबेको प्लेटफर्म, ला लोलोसा छ, जुन महत्त्वपूर्ण समुद्री रिजर्भ हो। कोभको समुद्र तट केवल १२० मिटर लामो छ, सुनहरा बालुवा छ र एक सुपर शान्त ठाउँ हो। ओह, र यसको १ 120 1987 देखि नीलो झण्डा रहेको छ।
माल् पास पासको अतिरिक्त तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ Tio Ximo cove र ला Almadrava कोव। पहिलो सियरा हेलाडाको पैदल र शहरको उत्तरमा हो। यो दुई उच्च चट्टानहरूको बीचमा लुकेको छ, क्रिस्टल सफा पानी छ, र स्नोर्कलिंगका लागि उत्कृष्ट छ। यो मुश्किल 60० मिटर लामो छ र बालुवा चट्टानहरूमा मिसिएको छ तर भाग्यवस यसमा लाइफगार्डहरू, छाता र डेक कुर्सीहरू छन्।
यसको अंशको लागि, La Almadrava कव सियरा हेलाडाको फेदमा छ र एक सय मिटर लामोमा पुग्छ। यसको क्रिस्टल स्पष्ट पानीमुनि धेरै समुद्री जीवन र चट्टानी खाट छ, त्यसैले यदि तपाईंलाई डुबुल्की मार्न वा स्नोरकेल मनपर्दछ भने यो तपाईंको गन्तव्य हुनेछ। यसले केवल sun 47 सनबेडहरू प्रदान गर्दछ त्यसैले ढिला नगर्नुहोस्।
बेनिडोरम छ रातको जीवन? अवश्य! शहर मा वरपर छन् १ pub० पब वा डिस्को र तिनीहरू जताततै छन्, बोर्डवाकमा, पुरानो शहरमा, सडकमा, छेउछाउको Altea तिर। त्यहाँ एक धेरै लोकप्रिय क्षेत्र को रूपमा चिनिन्छ अंग्रेजी क्षेत्र जुन सडकहरू आइबिजा, मल्लोर्का, गेरोना र लन्डनले चिन्ह लगाएको छ। तपाईंले यहाँ कल्पना गर्नुहुने बित्तिकै, पबहरू प्रचुर मात्रामा, बियर, साइडर, लाइभ संगीत र रातभर विश्वभरका मानिसहरू।
थप रूपमा, बेनिडोरमसँग एक छ सर्कस, एक शो केन्द्र भनिन्छ बेनिडोरम दरबार, क्यासिनो, मध्ययुगीन चुनौती, बिंगो र सबै भन्दा राम्रो, जो धेरै मदिरा सेवन गर्छन् र एक सेवा भनिन्छ पिईन्छन् माइक्रोपर्टी.
यो एउटा माइक्रो बस हो जसले मानिसहरूलाई पार्टीमा बाहिर जान्छ। यो अपरान्ह 8 देखि am बिहान अपरेट गर्दछ र प्रत्येक बस १०० यूरोको मूल्यमा १ people जना सम्म बोक्दछ। समूह को क्षेत्र मा पाँच डिस्कस, बार वा पब लगिएको छ।
तपाईं यो microfiesta सेवा को लागी २ hours घण्टा सम्म साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं पहिले भुक्तान गर्नुहोस्। क्षेत्रहरू जहाँ यसले काम गर्दछ सेल्ला, Finestrat, ASIfaz डेल पाइ, ला नुसिआ, विलाजुयोसा, Relleu, Polop र Callosa d'en saria। तपाईंले कहिले पब क्रोल गर्नुभयो? यो त्यस्तो केही हो तर मोटर चालित छ।
अन्तमा, शहर जहिले पनि कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दछ। सबै भन्दा प्रसिद्ध यो 1959 पछि लिइएको हो कि बेनिडोरम गीत महोत्सव। एक संगीत महोत्सव पनि ठाउँ लिन्छ indie २०१० देखि। तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यस स्पेनिश शहरसँग पर्यटनको लागि धेरै प्रस्तावहरू छन्। के मैले जानेको लागि पहिले नै तपाईलाई विश्वस्त गरें?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » बेनिडर्ममा के गर्ने
बच्चाहरूसँग जान होटलहरू कसरी छनौट गर्ने